Mareykanka oo Diyaarad Loogasoo Riday Ciraaq iyo Ciidanka IS oo Dhul Hor leh Qabsaday.
Tuesday August 19, 2014 - 11:46:13 in Wararka by Super Admin
(Rating 3.4/5 Stars) Total Votes: 7
Wararka ka imaanaya wadanka Ciraaq ayaa sheegaya in ciidamada mujaahidiinta dowladda islaamiga ah ay saacadihii lasoo dhaafay ay dagaallo culus lagaleen saliibiyiinta mareykanka iyo maleeshiyaad murtadiin ah.
Dagaal culus oo ka dhacay gobolka Naynawaa ayay mujaahidiinta ugu suurtagashay in ay gacanta ku dhigaan gaadiid dagaal oo ay wateen maleeshiyaadka Bashmarka sidoo kalane waxay qafaasheen inkabadan 150 katirsan maleeshiyaadka calmaaniga ah.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in ciidanka difaaca cirka mujaahidiinta ay dhulka soo dhigeen diyaarad dagaal oo loo malaynayo in ay leedahay dowladda kirishtanka Mareykanka.
Warar lagu faafiyay baraha bulshadu ku wada xariirto ayaa lagu sheegay in gacanta lagu dhigay duuliyihii diyaaradda oo ah askari mareykan ah balse illaa iyo hadda wax war ah kamasoo bixin mujaahidiinta.
dhinaca kale diyaarad dagaal oo ay lahaayeen maleeshiyaadka shiicada Rawaafidda ayaa lagusoo riday duleedka magaalada Tikriit ee gobolka salaaxudiin,intabadan jabhadaha dagaalka wadanka ciraaq ayaa shalay holcayay ciidamada mujaahidiinta waxay hurumarro ballaaran ka sameeyeen duleedka koonfureed ee magaalada Baqdaad.
shabakadaha soo tebiya dagaalka ciraaq ayaa xaqiijiyay in mujaahidiintu qabsadeen mandiqadda al-ladiifiyah iyagoona dhulka soo dhigay diyaarad dagaal.
War rasmi ah oo kasoo baxay dowladda islaamiga ah gaar ahaan wilaayada Naynawa ayaa muslimiinta loogu faah faahiyay wararkii ugu dambeeyay ee saaxaadka jihaadka wilaayada iyo halka ay kala marayaan ciidamada Towxiidka iyo kuwa sheydaanka.
Xoogaga ISIS oo maamulo dhul ballaaran oo Suuriya Ciraaq katirsan waxay beeniyeen in laga qabsaday biya xireenka weyn ee duleedka Muusil oo maalmo ka hor lagala wareegay maleeshiyaadka bashmarkaha dabadhilifyada ah.
Madaxweynaha Mareykanka Obama oo shir Jaraa’id qabtay ayaa sheegay ciidanka Cirka USA ay Kurdiyiinta calmaaniga ah usahleen qabsashada Biya xireenka Muusil waxaana muuqata in Mareykanku si toos ah ula dagaalamayo mujaahidiinta Ciraaq tan iyo wixii ka dambeeyay sanaddii 2011-ka oo aheyd markii mareykanku ciraaq isaga cararay.